စိတ်ဝင်စားရင်ဆက်ပြောမယ် ….. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » စိတ်ဝင်စားရင်ဆက်ပြောမယ် …..
Posted by fatty on Jun 27, 2011 in Creative Writing, Drama, Essays.. | 32 comments
ဒီအကြောင်းလေးက တနေရာမှာကျနော်မန်းပြီးသားပါ ….။
ဒါပေမဲ့ သိပ်သတိမထားမိကြဘူး …. king တယောက်တော့ရိပ်မိသွားတယ်ထင်ရဲ့ .. ဦးဖက်နော် အတော်စုံလှပါလား
ဆိုပြီး ပြန်ပြောသေးတယ် ..။ တချို့လဲသိချင်သိမယ် တချို့လဲ သိချင်မှသိမယ် ..။
သူငယ်ချင်းတယောက်က သူ့အတွေ့အကြုံပြောပြလို့ကျနော်လဲသိရတာပါ …။ ကိုယ်တွေ့မဟုတ်ပါဘူး ..။
သူငယ်ချင်းက ကုမ္ပဏီတခုမှာ အလုပ်လုပ်တယ်။ သူ့အလုပ်က အင်ပို့ အိပ်စ်ပို့ နဲ့ဆိုင်လို့
မြို့ထဲကိုအမြဲသွားနေရတယ် … ဘဏ်မှာ L/C ဖွင့်မယ် earning ၀ယ်မယ် … အစရှိသဖြင်းပေါ့ ..။
အဲတော့မြို့ထဲကိုနေ့တိုင်းရောက်တာပေါ့ဗျာ .. နွေရာသီဆိုရင်တော့ ပိုပြီး ပင်ပန်းတယ် ရာသီဥတုက ပူလွန်းတော့
ဟိုရုံးပြေးဒီရုံးပြေးနဲ့ ချွေးတလုံးလုံးပေါ့ ….။ တခါတခါ မောလွန်းလို့ မြို့ထဲက အဲယားကွန်းရှိတဲ့ဆိုင်တွေမှာ
၀င်နားပြီး စာရွက်စာတမ်းတွေစစ်ဆေးတာ ဖေါင်တွေဖြေ့တာ ထမင်းဘူးဖွင့်စားတာတွေ လုပ်တာပေါ့ ..။
တခါတော့ မြို့ထဲက ဂျေဒိုးနပ် ဆိုင်မှာ ၀င်နားလိုက်တယ် စာရွက်စာတန်းလေးတွေ အေးအေးဆေးဆေး စစ်မယ်ပေါ့။
ပြီးတော့ အအေးမှာသောက်ရင်း အလုပ်လုပ်နေလိုက်တယ်။ ဒါတင်မပြီးသေးဘူး ရေသန့်တဘူးမှာသောက်လိုက်ပြန်တယ်။
သူတို့က ရေသန့်မှာရင် ဖန်ခွက်ပါချပေးတာကိုး ..။ ရေသန့်လေး အေးအေးဆေးဆေး သောက်ပြီး
အမောဖြေဘို့ ဘေးဘီလှည့်ပတ်ကြည့်တော့ ဆိုင်ထဲကလူတွေ တချို့က ဖန်ခွက်လေးတွေကို သောက်ပြီး
မှောက်ထားတာတွေ့လို့ သူလဲအဲလိုဘဲထားလိုက်တာပေါ့ …။ ပြီးတော့ ပါလာတဲကစာရွက်စာတန်းတွေ ထုတ်ပြီးပြန်စစ်ရင်း
အဲဒီမှာ ဇာတ်လမ်းစတော့တာပါဘဲ ..။ သူ့နားကို အသားညိုညို သန့်သန့်ပြန့်ပြန့်လူတယောက်လာထိုင်တယ် ..။
ညီလေး ဘယ်လောက်လဲပြောတဲ့ .. သူလဲအူကြောင်ကြောင်ဖြစ်နေတာပေါ့ ..။ အဲဒီလူကပြောပြန်တယ်
အော် ငါ့ညီက လူသစ်ထင်တယ် ပိုအဆင်ပြေတာပေါ့ မင်း ထုံးစံထက်ပိုရလိမ့်မယ်လို့ပြောပြန်တယ် ..။
သူကတော့ အကိုကြီးလူမှားနေပြီထင်တယ် .. ကျနော့မှာဘာမှရောင်းစရာမပါ ပါဘူး ကျနော်က ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းပါ …
ရှင်းပြရတာပေါ့ ….။ အဲဒီလူက မလျှော့သေးဘူး အဖွားကြီးက သိပ်မကြီးသေးပါဘူးကွတဲ့ …။ ကဂျီကဂျောင်လဲ မကျပါဘူးတဲ့ ..။
သူလဲဘေးဘီကြည့်လိုက်တယ် .. တချို့လူတွေကလည်း သူ့ကိုမသိမသာကြည့်နေကြတယ် ..။ အဲဒီအကြောင်းတွေကို အဆောင်ပြန်ရောက်မှ
သူ့သူငယ်ချင်းတွေကိုပြောပြတော့ …. မင်းပါမသွားတာကံကောင်းတယ်တဲ့ .. မင်းမသိဘူလား အဲဒီအကြောင်းတွေကို .. ဆိုပြီးသူ့သူငယ်ချင်းတွေက
ရှင်းပြရတယ် .. သူ့သူငယ်ချင်းတယောက် အူကြောင်ကြောင်နဲ့ပါသွားဘူးတယ် .။ သူ့ကိုကားနဲ့ခေါ်သွားတယ်တဲ့ အိမ်တအိမ်ရောက်တော့
သားသားနားနား အဖွားကြီး နဲ့နှစ်ပါးသွးရတာပါဘဲ …..။
………………… စိတ်ဝင်စားရင်ဆက်ပြောမယ်လေ ……………။
အင်း အရမ်းစိတ်ဝင်စားပါတယ် အကိုဖက် ။ အနော် တို့ မန်းတလေးမှာ ကြားဖူးတာကတော့ ဗိုလ်ချုပ်ဈေး မှာတဲ့ ။ အဲဒါများလား လို့ အရမ်းသိချင်လာတယ် ။ ရန်ကုန်မှာ လမ်းစရိတ်ပြတ်နေတဲ့ အကိုရွှေ အတွက် စဉ်းစားမိလို့ ပါ ။ နောက်ဆက်တွဲ လေး ကို အမြန်ဆုံး တင်ရှိပေးဖို့ တောင်းဆိုပါတယ်နော် ။
်fatty ရေ စာရေးရင် windtalker ကို မရှုံးစေနဲ့နော်။ windtalker post ၁ခါတင်ပြီးတာနဲ့ ပေါက်သွားပြီ။ဒီတခါ fatty အလှည့်။စိတ်ဝင်စားတယ် ဆက်ပြောပါ။
အား တကယ်လားဗျ ရန်ကုန်မှာတစ်ခေတ်ပြန်ထလာပြန်ပီပေါ့။ ရန်ကုန်နဲ.ဝေးနေတာ ၁ နှစ်ပဲရှိသေးတယ်။
မသိတော့ဝူး …..ယောက်ကျား ပရော(စ်)တွေ………….ဆိုးဘ….
အကို nature ရေ ။ ညီလေး က ဒီမှာ ရောက်နေတာ ။ ကိုယ်သိတာလေး တွေ ကို ပြန်ဖောက်သည်ချ ။ ကိုယ့် အတွေးအခေါ်လေးတွေ ကို ပြန်ဖောက်သည်ချပြ လို့ ရလို့ ဒီ ရွာထဲ မှာ ပျော်မွေ့ နေတာပါ ။ ဘာမှ မပြိုင်ချင်ပါဘူး ။ ပြိုင်လာမယ် ဆိုရင်လဲ အရှုံးပေးပါ့မယ် လို့ ။ အားလုံး ကို လေးစားပါတယ် ။
ဟဲဟဲ ဆက်ပြော စိတ်ဝင်စားတယ် … အကယ်၍ ဒိုးနပ်ဆိုင်ရောက်လို့ ရေမှာသောက်မိရင် ခွက်ကို ဘယ်လိုထားရမှာလဲ သိတော့ဘူး သွားရင်းလာရင်း ရေဆာလို့ ရေသန့်တစ်ဗူး ဝယ်သောက်မိရင်တောင်
ဆိုင်ထဲမှာပဲ အဝသောက်ပြီး ချန်ထားခဲ့တယ် မေ့ပြီးယူသွားလို့ကတော့ ….ဂွမ်းပြီသာမှတ်
“Service & Money interchange”
But, Interesting story, please continue.
အင်းးးးးးးးးးး ဒါ့ကြောင့် ကင်း မန့်တာကို ဖတ်ပြီး တမျိုးပဲလို့တော့ ထင်မိသား။ မြွေ မြွေချင်း ခြေမြင်နေကြတာပေ့ါလေ။
ရွာထဲက အပျိုချော မမ ရယ် အထင်တော့ မလွဲလိုက်ပါနဲ့
” မြွေ မြွေချင်း ခြေမြင်နေကြတာပေ့ါလေ။ ” ပြောတယ်ဆိုတော့ဗျာ ..
ကိုဖက်ကိုတော့ ပြောတတ်ဝူးးးး … ဟီး ..
ကျွန်တော်ကတော့ … Single Father ဆိုတော့ သိပ်သိဘူးဗျ ရမ်းကြိတ်လိုက်တာ တိုက်ဆိုင် သွားတာ ဖြစ်မှာပါ …….. :D
ကြားဖူးတာ စကော့ဈေးမှာ ဗလတောင့်တောင့်နဲ့ စပို့ရှပ်လက်ပြတ်ပြီး ရပ်နေရင် lonely ဖြစ်နေတဲ့ လေဒီကြီး၊ အခြော်တကောက်ကြီးများ ကားနဲ့လာခေါ်သွားကြတယ်တဲ့။ သူတို့က ရွှေဘိုသားဆိုရင် ပိုခိုက်တယ်ပြောတယ်။ ရွှေဘိုသား ဝါးရင်းတုတ်က နာမည်ကြီးတယ်လေ….
ရေဆင်းတက္ကသိုလ် ရှိရာ ပျဉ်းမနားမြို့ မဟာက အကြောင်းကိုလည်း …
အချိန်ရလို့ရှိရင် ပို့စ်တင်ပေးရမလားမသိ …
မသိချင်ရင်တော့ သူဂျီးပွိုင့်ပေးရမှာစိုးလို့ မတင်တော့ဘူးလေ ….
“ရှေ့ကထမင်းထုပ်ပဲငန်းနေတယ် နောက်ဝါးရင်းတုတ်တော့မမြင်ဘူး” လို့
မုန်းစရာကောင်းလိုက်တာ အသက်ကြီးတာတောင် တဏှာမပြီးနိုင်သေးတာ ခက်တာပါပဲ ။
အော် ဒုက္ခ ဒုက္ခ အသက်ကြီးတာတောင် ဒီဘက်ကို စိတ်ကရောက်နေသေးတယ် ..
နွယ်ပင် etone တို့ရေ …. လောကကြီးမှာ လူအမျိုးမျိုးအဖုံဖုံ ဆိုသလိုပေါ့ကွယ်။
ဒုက္ခ ဒုက္ခ .. လူအမျိုးမျိုး စိတ်အထွေထွေ တဲ့ … ဒီအသက်အရွယ်ရောက်တာ တောင် ရာဂ မီးမငြိမ်းနိုင်သေးပါလား ..
တဏှာ ဆိုတာကို ယောက်ျားတွေပဲ ကြီးကြတယ် လို့ ထင်နေကြတာ .. မိန်းမတွေလဲ ကြီးကြပါတယ် (အဟုတ် .. တို့တော့ မဟုတ်ဘူးနော်)
ဟိုတုန်းကတဲက သင်္ဘောသား မိန်းမတွေ .. အလုပ် လုပ်စရာ မလိုအောင် ပြည့်စုံ .. လစ်ဟာနေတာတွေကလဲ ရှိ .. တစ်နှစ်မှာမှ ၂ လလောက်ပဲ ရတဲ့ (ဝေဒနာ)ကို ကျန်တဲ့အချိန်မှာ ဒီလိုပဲ ကြံဖန် ရှာဖွေကြတယ် ..
အခု ခေတ်မှာလဲ ဒီလိုပါပဲ .. ဒါက မိန်းမတွေ ခေါ်လို့ လိုက်သွားမိရင် တော်ပါရဲ့
အချော်တကောက် နှစ်ဖက်ချွန်နဲ့များ တွေ့လို့ .. ငါပြီး နင့်အလှည့် ဆိုရင် မျက်မျက်ကလေး ရမလားလို့ လိုက်မိတဲ့ ငနဲ ဒုက္ခ (လှလှကြည်)နဲ့ တွေ့မှာ ..
သြော် ကာလသားကိုလဲ မကြောက် .. ကာလသမီးကိုလဲ မကြောက်
လေးလုံးကို လဲ မကြောက်ကြတဲ့လူတွေ ပါလား .. အနိစ္စ ဒုက္ခ အနတ္တ ..
ပညာပေး အစီစဉ်တွေ ရှိနေပါလျှက် လေးလုံးမကြောက်တဲ့ဟာတွေ တပုံကြီးရှိသေးတာ ဘာလို့ များပါလိမ့်…အတန်းပညာသင်ရိုးမှာ အဲ့ဒီဘာသာပါ ထည့်သင် သင့်တာ … ။
ရန်ကုန်မှာ ဒီလိုတွေ ရှိတယ် ပေါ့ …. အပြင်သွားရင် တော်တော် သတိထားပြီး နေရ ထိုင်ရမဲ့ ပုံပဲနော် ။
သွားသတိ …. လာ သတိ … စားသတိ နဲ့ပေါ့ ..။
ကျနော်တို့မြန်မာတွေမှာ .. ၅၀ ကျော် ၆၀ ဆိုရင် ဘုရားသွား ကျောင်းတက်အရွယ်လို့ပြောကြပြီ
သူများနိုင်ငံတွေမှာ … ၅၀ – ၆၀ လောက်ဆိုတဲ့အရွယ်တွေမှာ ဘ၀ရဲ့ ဖြတ်သန်းလာတဲ့အတွေ့အကြုံ
တွေနဲ့ အဲဒီအရွယ်ကြမှ လုပ်ငန်းကြီးတွေကို ဦးစီးလို့ကောင်းတုန်း … စိတ်ပျိုကိုယ်နုအောင်နေလို့
ကောင်းတုန်း။ ကွာခြားမှုနော် …။ sex နဲ့ပါတ်သက်လို့လဲ မြန်မာတွေက မကောင်းမှု တခုလို့
ယူဆကြတာများပြီး ( အတင်း ) ချုပ်တည်းလေ့ရျိကြတယ်လို့ထင်တယ်။ သူတို့နိုင်ငံတွေမှာတော့
ချုပ်တည်းမှုတော့ရှိမယ် ( အတင်း ) တော့မဟုတ်ဘူး။ လူဖြစ်တဲ့အချိန်လူ့စည်းစိမ် အပြည့်အ၀ခံစား
ကြတယ်လို့ ဆိုကြတယ်။ အဲဒီ sex နဲ့ပါတ်သက်တဲ့စိတ် ရော့ပါးသွားမှာ သိပ်ကြောက်ကြတယ်တဲ့။
တခါက RFA မှာလားမသိဘူး ဆွေးနွေးမှုလုပ်တာမှတ်မိလိုက်တယ်။ ကျနော်ဆိုလိုတာက
ဘယ်လိုနေသင့်တယ်ထင်ကြပါသလဲ။ ကျနော်တင်လိုက်တဲ့ ဒီပိုစ်ကို သာမန်အဖြစ်အပျက်ကလေး
တခု ကောက်တင်လိုက်တယ်ဆိုတာထက်ပိုပြီး လေးလေးနက်နက် စဉ်းစားပြီး lifestyle တခုအနေနဲ့
ကိုယ့်ဓလေ့နဲ့ကိုယ် ကိုယ့်ထုံးစံနဲ့ကိုယ် ကိုယ်ကြိုက်တာကိုယ်ယူ ဆိုတာထက် ပိုပြီး စဉ်းစားကြည့်ပေး
မြန်မာပြည်မှာ.. ဘာသာရေးနဲ့ရောသမမွှေပြီး.. ရှေးဘုရင်တွေက ..သူတို့အတွက်ချည်းကျန်အောင် ..သေသေချာချာကို … လူတွေကို ဘရိန်းဝရှ် လုပ်ခဲ့တာလို့ တွေးမိတယ်..။
Sex ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်.. အနုပညာအပျော်အပါးခံစားတာကိုပဲဖြစ်ဖြစ်.. သာမန်လူတွေ လွတ်လပ်စွာမခံစားဝံ့ အောင်.. ငရဲနဲ့ခြောက်….ဘုံနဲ့မြောက်လုပ်ထားခဲ့တာပဲ..။
ယောက်ျားဖြစ်ဖြစ်.. မိန်းမဖြစ်ဖြစ်… ပြည့်တန်ဆာကိစ္စကို…
ကျမ်းမာရေးတွေစိစစ်.. ခေါင်းပုံဖြတ်… ခိုးလုပ်တာတွေပျောက်အောင်.. မြန်မာပြည်မှတရားဝင်လိုင်စင်နဲ့… လုပ်သင့်တယ်ထင်ကြောင်းပါ…။
ယောက်ျားပြည့်တန်ဆာ ကတော့.. ကမ္ဘာအနှံ့ နိုင်ငံတိုင်းရှိပါတယ်..။
ဆရာဖက်ပြောတဲ့… ခွက်မှောက်တာနဲ့.. လာမေးတာကတော့ ..နည်းနည်းဆန်းတယ်..။
ကိုယ်လုပ်လိုက်တာလေးနဲ့ မတော်တဆ တိုက်ဆိုင်သွားရင်…ခက်ပြီ
တလောကတော့အသက် ၇၀ ကျော် အဖိုးကြီးကို ၂၀ ၀န်းကျင် အမျိုးသမီးတယောက် လက်ထပ်လိုက်တာ
ရော် ဆန်းတပြားပြားပါလား… ခုမှကြားဖူးတယ်..
လူပျိုကြီး၊ အပျိုကြီးတွေမှာ အဲဒီလို စိတ်ထွက်ပေါက် မရှိလို့ မသိစိတ် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာ အလိုမကျမှုတွေ ရှိနေတယ်တဲ့။ ဒါကြောင့် လူပျိုကြီးများ ဒေါသကြီးတာ၊ အပျိုကြီးတွေ ပစိပစပ်များတာဟာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်၇ာ ဝေဒနာတွေပါတဲ့။ မှီ ပြောတာမဟုတ်ဘူးနာ်။ စိတ်ပညာစာအုပ်မှာ ဖတ်ဖူးတာ ပြောပြတာ။ တော်ကြာ ရွာထဲက လူပျိုကြီး၊ အပျိုကြီးတွေ ၀ိုင်းရိုက်မှာ မီးမီး ကြောက်ကြောက်။
Big Defender က တော့ မသိရင် ခက်မယ်.. အရမ်းစိတ်ဝင် စားနေတယ်ပေါ့လေ… :D
ဆရာဖက် လုပ်ပါဦးဗျ အဆင်ပြေရင် king entertainment အောက်မှာ လုပ်ငန်းခွဲ တစ်ခုထပ်ထည့်လို့ ရတာပေါ့
ပုံမှန်ဖေါက်သည်တွေထဲက အုပ်စုတခုကတော့ မပျံတတ်တဲ့ ငှက်တမျိုးရဲ့ အော်သံ နဲ့ ခပ်ဆင်ဆင်ပဲ …တဲ့ …။
အန်ကယ်ကြီး အမေးမခံရလို့လား …..
ပုဆိုးကို ခါးတောင်းကြိုက်လိုက်ပါ … ပြီးတော့ ခြေသလုံးနဲ့ ပေါင်ကို ပေကြိုးနဲ့ ပတ်ပြီးတိုင်းပါ။
ဘယ်ဟာခြေသလုံးလဲ ဘယ်ဟာ ပေါင်လဲ ဆိုတာ ခွဲနိုင်ရင် စိတ်မလျှော့ပါနဲ့အုံး
တနေ့နေ့ လာမေးနိုင်ပါတယ်။ အဟဲ ကတော့နော် .. နောက်တတ်လို့။